Brief: Mhanya kune nzvimbo ku Linux yako system? Hewa nzira dzakasiyana-siyana dzaunokwanisa kuchenesa yako hurongwa kuti usunungure nzvimbo paUbuntu uye nedzimwe humwe Ubuntu hunoenderana nekuparadzirwa kwe Linux.
Nokufamba kwenguva, chero nzira ipi zvayo inoshandiswa inogona kuva yakazara sezvo mapurogiramu akawedzerwa uye abviswa. Kana iwe unofanana neTB yekuchengetedza simba, unogona kusanetsa kuchenesa Ubuntu kuita imwe diski nzvimbo. Asi kana dhayi yako yakaoma ine nzvimbo shoma, sekuti ndine 128 GB SSD laptop, kusunungura disk space inova chinhu chinodiwa.
Muchikamu chino, ini ndichakuratidza mamwe maitiro akareruka ekuchenesa yako Ubuntu system uye kuwana mamwe nzvimbo.
Nzira yekusunungura disk nzvimbo mu Ubuntu uye Linux Mint
Kune nzira dzakawanda iwe unoshambidza disk nzvimbo mu Ubuntu uye imwe Ubuntu based system. Ndakambokurukura mazita ematsetse emurairo mazano pano akazotevera nemamwe mazano e GUI.
Kunyange ini ndataura nzira dzinoverengeka pano, kana iwe uri wekutanga, dzivisa avo vakanyorwa se 'nyanzvi'. Kwete kuti haukwanisi kuishandisa, asi zviri nani kudzivisa kana iwe usingazivi zvauri kuita.
Ndiri kushandisa Ubuntu 16.04 paunonyora iyi tutori asi iwe unogona kushandisa matanho akafanana kune dzimwe Ubuntu zvinyorwa, Linux Mint, primary element OS nedzimwe humwe Ubuntu hwakakonzerwa neLuxux.
1. Bvisa mapuranga asina kushandiswa
Kana iwe ukaverenga mirairo yakakodzera yekuwana mirayiridzo, iwe ungangodaro wakawana mukana wokutora-get command 'autoremove'.
Iyi sarudzo inobvisa mabhesi nemapakiti akaiswa mauto ega ega kuti agutse zvido zvepakisi yakaiswa. Kana iyo purasi yakabviswa, izvi zvinowanzoiswa phakheji hazvibatsiri muhurongwa. Uyu murairo unobvisa zvinyorwa zvakadaro.Iye unobvisa zvakare Linux yekare kernel iyo
Iyo inobvisa zvakare Linux ma kernels akare akange akaiswa kubva pakarepo purogiramu inovandudza.
Uyu murairo usina-brainer iwe unogona kumhanya kubva nenguva nenguva kuti uwane nzvimbo yakasununguka pane Ubuntu yako system:
Sezvaunogona kuona, murairo uyu uri kuzosunungura 300 Mb yemukana wakasununguka mumutemo wangu.
Kusunungura nzvimbo neine autoremove command
2. Gadzira APT cache mu Ubuntu
Ubuntu inoshandisa APT (Advanced Package Tool) ye kuisa, kubvisa nekugadzirisa software pane system, uye pakuita izvozvo zvinoramba zvakachengetwa zvekare zvakakonzerwa uye zvakachengetwa mapeji kunyange mushure mekunge vabuda.
Iko APT pakutevedza purogiramu yepamusoro inochengetedza cache yePB pakapatari mu / var / cache / apt / archives. Nokufamba kwenguva, cache iyi inogona kukura zvakakura uye inobata zvakawanda zvepakiti iwe haunoda.
Unogona kuona ukuru hwechidziro ichi nemurairo uri pasi:
Sezvaunogona kuona, ndinodarika 500 Mb yekuchengeta cache. Paunenge usisina nzvimbo, iyi 500 Mb inogona kuita misiyano yakawanda.
Kuchenesa up cache kuchasunungura nzvimbo
Iye zvino, une zvingasarudzwa zviviri zvekutarisira cache.
Zvichibvisa chete zvipfeko zvisati zvaitika, saivo vanosimudzirwa nekuvandudzwa kwechangobva kuitwa, vachiita kuti zvive zvisina kukwana zvachose.
Kana kuchenesa cache yacho yose (inosunungurazve disk space):
3. Shamba thumbnail cache
Ubuntu inogadzira zvigadziriswa chinyorwa, nokuda kwekuona mufaira wefaira. Iyo inochengetedza zvigunzva iyo mumabhuku akavanzika mune yako user account pane nzvimbo ~ / .cache / thumbnails.
Nokufamba kwenguva, nhamba yezvigunwe zvinowedzera zvinoshamisa. Uyezve, iyo thumbnail cache ichazova nemifananidzo yakawanda yezvifananidzo zvisipo.
Iwe unogona kutarisa usayizi hwechidimbu cache nemurairo uri pasi apa:
Pamutambo wangu, thumbnail cache inopfuura 300 Mb muhukuru.
ukuru hwe thumbnail thumbnail cache kunogona kuva chigunwe chikuru
Saka ndiyo tsika yakanaka yekuchenesa thumbnail cache mwedzi mishoma kana kupfuura. Nzira yekukurumidza ndeyokushandisa iyo terminal:
4. Bvisa rekare Linux kernels dzakaiswa maune [Expert]
Mutemo wakakurukurwa mundima 1 inobvisa rekare Linux kernel. Asi hazvizoshandi kana iwe wakaisa ma kernel mu Ubuntu. Asi kubvisa Linux kernels yakare, zvisina kushandiswa zvichiri kukuchengetedza iwe nzvimbo yakawanda.
Saka, kana iwe pachako wakaisa Linux kernel, zvichida iwe unokwanisa kuzvisunungura zvakare.
Rongedza zvose ma Liner akaiswa maziso:
Kubvisa mavara akare zvakafanana nekubvisa chero imwe purasi. Ndiri kushandisa kuwedzera kwekombodhi yemafungiro ekunyora kuchengetedza kuverenga. Ichakubatsira iwe nerunyorwa rwepaketani dzichabviswa, saka iwe unogona kutarisa kaviri mazita asati aenderera mberi.
Cherechedza: Shandisa VERSION nehuwandu hwekernel yaunoda kubvisa
Zvandinokurudzira ndezvokuti ndichengetedze zvishoma kana zviviri kana zvichida zvikamu zvitatu zvinosanganisira zvekupedzisira. Nenzira iyi, iwe unenge uine imwe kana maviri mamwe mavara kuti uite nharo, kana pane chero chikonzero chekupedzisira kernel iwe haugoni kubvumira.
Unogona Kuverenga Kuti Unogona Sei Kuvandudza Linux Kernel Mu Ubuntu Uye Linux Mint
5. Bvisa nherera mapaki [Expert]
Kutanga, ngationei kuti chii chiri nherera mu Ubuntu.
Ngatiti iwe wakaisa purogiramu 'myprogram'. Asi iyi purafura ine kuvimba pairaibhurari 'mylib'. Iyi lib inowanzomiswa yakazowanika ne 'myprogram'. Kana ukabvisa 'myprogram', mylib inogona kuramba iine muitiro. Nokudaro mylib, munyaya iyi, inova nherera pakutevedzana.
Iye zvino, murairo wakanyorwa mundima 1 inobvisa mapuranga akadai akadaro. Asi fungidzira mhaka yawakanga iwe yaisa maibi manyowa ndisati waisa myprogram. Mutemo 'apt autoremove' haugoni kubvisa nherera pane iyi. Uye saka iwe uchafanirwa kuichenesa.
Iwe uchafanirwa kuwana dzose nherera mapeji kutanga wozobvisa. Tinofara, tine tool GUI yekuita izvi: gtkorphan, graphical frontend ye deborphan.
Isa gtkorphan kuburikidza nechinotara:
Uye kubvisa nherera pamapakiti, tsvaga Removed Orphaned Package chishandiso uye uchitungamirire kuti uwane nherera dzose mumutambo wako:
Tsvaga uye bvisa nherera mapaji mu Ubuntu
Kutendeseka, handingaendi nekuda kweiyi kunze kwekuti iwe unonyatsoda Mb yega yega yega.
6. Uninstalling applications unnecessary
Isu tose tine mitambo mishoma uye / kana zvichemo zvatisingashandisi. Regai kuvimba neni? Enda uye tsvaga yakaiswa software mu Ubuntu maitiro.
Mikana ndeyokuti une zviverengera zvepurogiramu dzakasungirwa kuti iwe unowanzoshandisa. Zvichida wakazviisa pamusana pekudzokorora kunoshamisa, kunze kwekutsamwa, kana kushanda basa rakasiyana.
Kana iwe uchida nzvimbo yakawanda yokubvisa kushandiswa kusina kushandiswa kana kushandiswa kuduku kunogara kuri pfungwa yakanaka.
Iwe unogona kubvisa purogiramu kubva panzvimbo yepurogiramu yepurogiramu kana kushandisa mutemo uri pasi neine zita rekunyora mazita:
7. Kushandisa GUI zvishandisi kusunungura nzvimbo mu Ubuntu
Takaona nzira dzakasiyana-siyana dzemitemo yekuita nzvimbo mu Linux system asi ndinonzwisisa kana iwe usingadi kushandisa mirairo.
Kuyeuka mirairo yose kana kuvashandisa zvose pamwe chete kunogona kunge kusina kunaka kwauri. Uye ichi ndicho chikonzero tine huwandu hwezvikwata zve GUI zvingakubatsira iwe kuti uite izvozvo mune zvishoma zvishoma uye nyore kushandisa shanduro.
Stacer imwechete yakadaro iyo yaungashandisa. Iwe unogona kuverenga nyaya ino kuti uzive nzira yekushandisa Stacer mu Ubuntu.
Unogona kutarisa zvimwe midziyo yekuchenesa Ubuntu uye uite nzvimbo yekusununguka nyore nyore.
Saka, wakaona nzira dzakasiyana-siyana dzokuchenesa utusi hwemutambo. Pamwe, ndinoshandisa zvakakwana-kuwana autoremove kakawanda kupfuura chero mimwe mirairo pano. Nguva dzose kushandisa iri murairo inoita kuti system isasununguka kubva kumafaira asina kufanira.
Ndinotarisira kuti nyaya ino yakakubatsira kuti uite nzvimbo yakasununguka muUbuntu, Linux Mint uye nezvimwe zvakagoverwa. Nditenderei kuti ndizive kana izvi zvakashanda kwamuri kana kana mune rumwe rupiro rwekugovera.
Nzira yekusunungura Nzvimbo mu / bhuti Chikamu pa Ubuntu Linux?
Nzira Yokunyora Nayo Mapokaji paBuntu uye Debian [Quick Tip]